José Calvo Poyato. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke La travesía ikpeazụ | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
José Calvo Poyato. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke La travesía nke ikpeazụ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Novela
Foto: José Calvo Poyato. (c) Pepe Travesía. Site n'ikike nke Ingenio de Comunicaciones.
Jose Calvo Poyato nwere ogologo ọrụ dị ka onye edemede nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na-ewu ewu na onye na-ede akwụkwọ akụkọ, n'etiti aha ya bụ Nkpuru eze, Mgbanwe na Madrid, The Black Bible, The Dragọn Nwanyị o Nrọ Hypatia, n'etiti ndị ọzọ. Daalụ nke ukwuu maka oge ị nọrọ na nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-agwa anyị gbasara akwụkwọ ọhụụ ya, Njem ikpeazụ, na isiokwu ndị ọzọ.
José Calvo Poyato - Ajụjụ ọnụ
AKWKWỌ AKW LKWỌ: IT ka bipụtara akwụkwọ ọhụrụ na ahịa, Njem ikpeazụ. Kedu ihe ị gwara anyị n'ime ya?
Njem ikpeazụ bụ, n'ụzọ, a ịga n'ihu nke ụzọ na-enweghị ngwụcha, nke agukọtara ya mbụ gburugburu ụwa site n'aka Juan Sebastián Elcano. Ugbu a, onye ọkwọ ụgbọ mmiri Spanish, nke a mụrụ na Getaria, ghọrọ etiti nke akwụkwọ akụkọ dị n'ime ya a na-agwa ya ihe mere yaMgbe anyị gagharịrị ụwa na nke mbụ, n'ihi na Elcano na-apụ n'anya site na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na omume ahụ yiri ka ọ dị mkpa ka anyị mara ihe mere ya. Gbakwunye na nke a afọ ndị sochiri ụwa mbụ juputara na nnukwu ihe na akụkọ ntolite anyị.
AL: Can nwere ike ịlaghachi n’icheta akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
Akwụkwọ mbụ m gụrụ bụ akụkọ ihe mere eme nke agha ntụte. Ọ bụ otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ site na Editorial Bruguera bụ nke ederede ederede na ọchị. A na-agụ egwu ahụ na mbụ. Mgbe ụfọdụ naanị ihe ọchị. Anyị dị ụmụaka afọ asaa ma ọ bụ asatọ. Echere m na ha nyere m ya mgbe m mere mkpakọrịta mbụ m, erubeghị m afọ asaa.
Akuko mbu m dere nke ahụ wee bụrụ akwụkwọ bụ ọmụmụ ihe mere eme na nsogbu nke narị afọ nke iri na asaa na obodo m: Ọgba aghara nke narị afọ nke iri na asaa na Villa de Cabra. Ọ meriri onyinye na ọ bụ ya mere e ji bipụta ya. Omeela afọ ole na ole kemgbe ahụ.
AL: Kedu akwụkwọ mbụ masịrị gị na gịnị kpatara ya?
Echetara m na ha masịrị m, dị ka onye na-eto eto, akwụkwọ Martín Vigildị ka Ndụ na-ezukọ. Ọzọkwa ndị nke Maxence Van der Meersch, dika Ozu na nkpuru obi! Dị ka ọkọ akụkọ ihe mere eme, m na-echeta na otu oge okpomọkụ na m na-agụ niile Mba ngosipụta nke Galdós. Ọ masịrị m. Echere m na ịgụ ihe ahụ kpebisiri ike que Emechara m bụrụ onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na Enwere m mmasị na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. N'oge ahụ ọ dịtaghị n'uche m na otu ụbọchị m ga-abụ onye ga-ede ha.
AL: isnye bụ onye edemede gị kachasị amasị gị? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
Ekwuola m ihe Don Benito Pérez Galdós kwesịrị. M omiiko banyere Ederede na nke ndi ode akwukwo di elu nke iri na iteghete dika Honoré Balzac ma ọ bụ Victor Hugo. N'etiti ndị edemede ugbu a, ọkacha mmasị m bụ Jose Luis Corral, ezigbo onye isi akwukwo. Ọnwụnwa nke Juan Eslava Galan na ọrụ nke Don Antonio Domínguez Ortiz na Spain nke Habsburgs na narị afọ nke XNUMX.
Aha Bovary. Ọ dị m ka ọ bụ otu n'ime ihe odide kachasị mma na akwụkwọ niile. Ahapụghị ya n'azụ Lazarọs, protagonist nke Ndị Lazarillo de Tormesma ọ bụ Sancho Panza. Ha abuo dicha nma n’anya ha n’edetu aka ha na ndu ha.
AL: Omume ọ bụla pụrụ iche mgbe ị na-ede ma ọ bụ na-agụ ihe?
Ana m ekewapụ onwe m iche mara ezigbo mma, na-enye m ohere ide na ebe enwere ndị ọzọ na-akparị ụka. Ọ bụ ya mere m ji edekarị akwụkwọ na kichin n'ụlọ m, ụlọ ezinaụlọ. Mgbe m mere mgbazi ikpeazụ ederede iji nye ya ndị nta akụkọ, ana m ekewapụ onwe m iche ma na-agụ na-enweghị nkwụsị. Mgbe ụfọdụ m na-ede - Ide ederede bu agba ikpeazu n'ile - ruo ọtụtụ izu ma enwere ike ịha nha, na-agbanwe agbanwe n’ahịrị, nke a ga-edozi. N'ihi ya, ọ masịrị m ịnọ naanị m.
Dịka m kwuchara, enwere m ike ime ya ebe ọ bụla na ugbu a Enweghị m oge kachasị amasị m. O nwere oge ụfọdụ ọ masịrị ide ihe n’abalị. Mana ka oge na-aga, ekwubiwo m nke ahụ ekwesịrị ide ya mgbe mmadụ nwere ntụsara ahụ, gbapụ. Mgbe ụfọdụ, mmadụ na-ekwusi ike ide ihe —N’echiche nke ide - na echiche anaghi aghagha. N'oge ndị ahụ ọ ka mma ịhapụ ya. Enwere oge mgbe, na ntụle, ihe niile na-abịa n'ụzọ dị mfe ma ị ga-eji ya mee ihe.
AL: Anydị ọ bụla ọzọ na-amasị gị?
E wezụga akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, agụrụ m ọtụtụ edemede akụkọ; ka emechara, abum onye akowaala. Agụkwara m akwụkwọ akụkọ ojiima kpochapụwo Dashiell ụdị hammett ma ọ bụ Vázquez Montalbán dị ka akwụkwọ mpụ ugbu a. Ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ na-ekwusi ike na na akwụkwọ akụkọ m, enwere akụkọ ojii mgbe niile, na-enweghị akụkọ ihe mere eme nke ọma, nwere ike ime, yabụ dabara nke ọma na akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ akụkọ ahụ.
Emechaala m Njedebe na amìnke Irene Vallejo dere. Ana m agụ Ngwá agha nke Ìhè, na Sanchez Adalidma Nwanyị echefuru echefunke José Luis Corral dere. Na-eche akụkọ ndụ Carlos III. Ana m achọ ozi na obere ihe amaara nke Spanish nke narị afọ XNUMX na ọkara ya.
AL: Kedu ka ị chere na ebe mbipụta akwụkwọ dị maka ọtụtụ ndị ode akwụkwọ enwere ma ọ bụ chọọ ibipụta ya?
Ikekwe ọ bụ ihe mgbagwoju anya na afọ ndị a. Nsogbu a malitere na 2008 metụtara ụwa akwụkwọ. Ezigbo ezigbo ndị odeakwụkwọ ahapụghị onye mbipụta. O siiri m ezigbo ike. Enwere ugbu a ọtụtụ ndị edemede nwere echiche nke ibipụta akwụkwọ, mana ohere dị ụkọ. Enwere ike ibipụta desktọọpụ, mana ọ bụrụ na nkesa ahụ adaa, nke dị mkpa. Ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ akụkọ, dị ezigbo mma ma bụrụ nke ọma, anaghị ahụ ọkụ ma ọ bụ hụ ya n'ụzọ pere mpe.
AL: Ọ bụ oge nsogbu anyị na-enwe na-esiri gị ike ma ọ bụ ị ga-enwe ike idobe ihe dị mma maka akwụkwọ akụkọ n'ọdịnihu?
Ọrịa ntiwapụ ọrịa anyị na-ahụ ọ na-esiri m ike. Ọ bụghị naanị maka onye nwụrụ anwụ na ndị ọrịa na-esiri ike ịgbake. Ọzọkwa n'ihi ihe mgbochi, mmachi, enweghị ike ma ọ bụ mmegharị mmekọrịta dị ukwuu. Obu ihe ndi obodo anyi anaghi atu anya ya. Ọrịa ndị a metụtara akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, mana ha abụghị nsogbu na Europe.
Maka mụ onwe m, ọ dị mfe. Ana m ebi n’ụlọ ụlọ - Ihe okomoko na onodu ndi a - y oru nke onye edemede bu owu owu, ọ bụ ezie na m na-ede oge ụfọdụ, n’etiti nnọkọ ezinụlọ. Echere m na anyị nwere ike ịchọta nkwubi okwu site na ihe na - eme ka anyị bụrụ ndị na - enweghị nsogbu karịa ka anyị chere, na la na-atụ aro ịdị umeala n'obi nke ukwuu ma ọ bụ na ndidi, n'ime ọha na-achịkwa ọsọ ọsọ na ngwa ngwa, ọ dị mma ka anyị mụta ịzụlite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » José Calvo Poyato. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke La travesía nke ikpeazụ
Sixto Rodriguez Hernandez dijo
Aga m achọ ọrụ onye edemede a n'ihi na nke kachasị amasị m bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme.
Zaghachi Sixto Rodríguez Hernández
Tierra, nke Eloy Moreno dere
Oge n'etiti etiti